Baarlamaanka DFKMG oo Qodobadii Badda ee ay hore usoo saareeen ku soo daray Qodob Dhul-badeedka (Biyaha Dalka) Soomaaliya kusoo koobaya 12 mayl-badeed oo keliya oo Territorial Waters
Baarlamaanka DFKMG ma la khiyaaneeyey mase waxay u bareereen Khiyaano Qaran oo ay ka galeen Shacabka Soomaaliyeed? Waayo qoraalka ay u gudbiyeen Madaxweynaha si uu saxiixo waxa uu badda Soomaaliya ku soo koobayaa 12 mayl-badeed.
SomaliTalk.com | Oct 22, 2011
Baarlamaanka DFKMG ayaa October 8, 2011 waxay u codeeyeen 6 qodob oo ay ku difaacayeen badda Soomaaliya, laakiin waxaa maanta soo shaac baxay warqad ku shaabaadaysan guddoomiye ku xigeenka Baarlamaanka taas oo uu ku jiro qodob aan markaas saxaafadda loo sheegin kaas oo badda Soomaaliya ku soo koobaya 12 nautical miles oo Territorial Waters, sidaas daraadeedna meesha ka saaraya xeerkii badda Soomaaliya u qornaa 40-ka sano ee Law No. 37 ee dhigaya in Biyaha Dalka Soomaaliya Territorial Waters ay yihiin 200 nautical milse..
Qodobadii uu shir guddoonku ka akhriyey Baarlamaanka October 8, 2011 kuma aysan jirin in badda Soomaaliya lagu soo koobayo 12 mayl-badeed oo Territorial Waters ah. Laakiin nuqulka warqadda baarlamaanka ka soo baxday ee loo loo gudbiyey madaxweynaha DFKMG Sheikh Shariif waxaa si qeexan ugu qoran in badda Soomaaliya Territorial Waters (Bihaha Badlka) lagu soo koobo 12 maylbadeed.
Taasi haddii ay hirgasho, waxaa Shacabka Soomaaliyeed ku waayayaan boqolkiiba 97% sidii horeba u sheegay Faarax Qare. Waxa kale oo arrintaasi ay Kenya u rumaynaysaa riyadeedii ay ku taameysey 40-ka sano ee ahaa in Territorial Waters (Biyaha Dalka) oo Soomaalida u ah 200 mayl-badeed in lagu bedelo Aagga Dhaqaalaha (EEZ) , markaasna Biyaha Dalka lagu soo koobo 12 mayl-badeed - (Faraqa u dhexeeya EEZ iyo Territorial Waters hoos ka akhri).
Nuqulka Warqadda Guddoonka Baarlamaanka u ugudbiye madaxweynaha DFKMG oo aad linkiga hoose ka daalacan kartaan waxa uu badda Soomaaliya ku soo koobayaa 12 mayl-badeed. Arrintaas oo ah tii uu ra'iisul Wasaaraha DFKMG marar badan ku celceliyey in aysan jirin cid xukuumadiisa ah oo ka hadashay 12 mayl-badeed, balse hadda ay si waadax ah u soo shaac baxday khiyaamadii qarsoonayd ee lala maagaanaa shacabka Soomaaliyeed in lagu duudsiiyo dhul-badeedkooda 97%.
Haddii Madaxweynaha DFKMG, Sheikh Shariif , uu saxiixo in badda Soomaaliya tahay 12 maylbadeed, sida guddoonka Baarlamaanku ka codsaday, waxay noqoneysaa markii ugu horeysey oo maxadweyne (KMG) oo Soomaaliyeed saxiixo in badda Soomaaliya lagu soo koobo 12 mayl-badeed, taasina ay meesha ka saareyso xeerkii Badda Soomaaliyeed ee Law No. 37 ee dhigaya in Territorial Waters-ka Soomaaliya uu yahay 200 mayl-badeed, Soomaaliduna isku duudsiineyso 97% baddeeda.
Halkan ka akhri Qoraalka loo gudbiyey Sheikh Shariif
Waxaa saxaafadda maalintaas, Oct 8, 2011, loo akhriyey, baarlamaankana loo sheegay in la qaadanayo sharcigii 1988, waxaanse aan guddoonku saxaafadda u sheegin in badda Soomaaliya lagu soo koobayo 12 maylbadeed. Sida adduunka oo dhan laga ogyahay, qormada hoosena aad ka daalacan kartaan, Soomaaliya weligeed kama tanaasulin xeerka LAW NO. 37, waxayna xeerka badaha Adduunka Saxiixday ayadoo aan ka tanaasulin xeerkaas, sida Faarax Qare si geesinimada leh ug ahor akhriyey Shirkii Seychelles ee saraakiisa ciidamada ee Bariga Afrika ay ku soo bandhigeen in badda Soomaaliya lagu soo koobo 12 maylbadeed, laakiin arrintaas ay raali gelin ka siiyeen.
DFKMG ee Sheikh Shariif ayaa u muuqata in ay ka go'antahay in badda Soomaaliya lagu soo koobo 12 mayl-badeed, waxaana laga soo bilaabo shirkii Istambul si cad u muuqdey in ay doonayaan in Badda Soomaaliya lagu soo koobo 12 maylbadeed halkii ay ka ahayd 200 nautical miles oo Territorial Wates, shirkaas Istambuul oo kadambeeyey markii la is hortaagey heshiiskii Isfahamka ee ay DFKMG la gashay kenya.
Qoraalka loo gudbiyey madaxweynaha DFKMG
Nuqul qoraalka loo gudbiyey Madaxweynaha DFKMG oo soo gaarey Telefishanka SomaliChannel, nuqulkaas oo soo gaarey SomaliTalk ayaa waxaa ku cad in si waadax ah ag guddoonka baarlamaanku uga codsanayaan in madaxweynaha DFKMG si "Dhaqso u saxiixo" goaankaas lagu soo koobayo badda Soomaaliya 12 maylbadeed.
Waxaa laga warsugayaa baarlamaanka DFKMG marka ay arrintan ka warhelaan waxay kaga jawaabaan. Waxaana la kala ogaan doonaa jawaabta su'aasha sare: Baarlamaanka DFKMG ma la khiyaaneeyey mase waxay u bareereen Khiyaano Qaran oo ay ka galeen Shacabka Soomaaliyeed? - Haddii goaankii ay u codeeyeen October 8, 2011 uu sidaas u qoraa ama gadaal lagaga soo daray?
Baarlamaanka DFKMG ayaa go'aankooda cinwaan uga dhigay DHAXAL-DHOWR, waxaase cad in haddii uu hirgalo qorshanan badda lagu soo koobayo 12nm oo Soomaalidu ku waayeyso 97% dhul-badeedkeeda in go'aankaasi noqonayoo DHAXAL-WAREEJIN.
Qodobadii ay Baarlamaanku u codeeyeen Oct 8, 2011 hoos ka akhri:
Qodobka 1aad xilligii baarlamaanku codaynayey wax faahfaahin ah lagama bixin, waxaana shacabka Soomaaliyeed u haysteen in qodobkii LAW NO. 37 aan laga tanaasulin, maadaama aysan hore u dhicin meel lagaga tanaasuley. Waxaase hadda soo baxay in Baarlamaanka DFKMG uu ka tanaasuley sharcigii badda Soomaaliyeed? Haddii kale jawaab ay shacabka Soomaaliyeed sugayaan.
Halkan ka sii akhri
Sida aan kor kusoo xusnay, arrinta 12-ka mayl lagu soo bandhigay shikrii Seychelles (September 16, 2011) ee uu ka qayb galay Taliyaha Ciidanka Badda Soomaaliyeed, Amdmiral Faarax Cumar Axmed (Faarax Qare) , kaddibna uu arrintaas ka dalbaday in raali gelin ay ka bixiyaan saraakiisha Bariga Afrika ee soo bandhigtay, waana la siiyey raali gelintaas. Faarax Qare warqadii uu qoray waxa uu ku xusay saddexdan qodob:
1. With the Somali Law No. 37 of 1972, Somalia was given a 200nm zone of territorial waters. This was respected by the international community, like in the cases of Peru
2. “By and with the signature and ratification of UNCLOS (as country No. 40), Somalia became a signatory to the United Nations Common Law of the Sea (UNCLOS), but under the reservation that Somalia Law No. 37 (territorial waters) would be respected ("notwithstanding the stipulations of Somali Law No 37 of 1972 concerning Somalia's territorial waters), while the provisions that the 200nm EEZ (exUNCLOS) would apply for the protection of the Somali economic interest in addition.”
3. Since 1989 and after UNCLS came into force, Somalia had declared and has de facto and de jure a 200nm EEZ under UNCLOS. That also was recognized by the international community and all the subsequent international conferences (incl. the Pan African fisheries conferences) as well as especially also by the OUA and her successor the AU. (Documents available). Tixraac Warqaddii Faarax Qare: http://somalitalk.com/2011/badda/admiral_farah.html
Kenya ayaa bishii September 2011 waxay shirkado ay ka mid tahay TOTAL heshiis kula gashay in ay shidaal ka baaraan aagga BLOCK L5, kaas oo gudaha u gashay badda Soomaaliya qiyaastii 3900 km oo laba jibbaaran, halkaas oo xeebta Raas Kambooni. (Akhri Kenya oo sheegatay in ay qabsatay Raas kambooni)
SomaliTalk.com | October 20, 2011
“By and with the signature and ratification of UNCLOS (as country No. 40), Somalia became a signatory to the United Nations Common Law of the Sea (UNCLOS), but under the reservation that Somalia Law No. 37 (territorial waters) would be respected ("notwithstanding the stipulations of Somali Law No 37 of 1972 concerning Somalia's territorial waters), while the provisions that the 200nm EEZ (exUNCLOS) would apply for the protection of the Somali economic interest in addition.” (Warka qoo dhan halkan ka akhri)
Maxaa hadda kkeenay in laga hadlo EEZ
Dawladda KMG ee uu madaxweynaha ka yahay Sheikh Shariif Axmed ayaa noqotay tii ugu horeysey oo heshiis Isfaham oo muran gelinaya Badda Soomaaliya la gashay Kenya. Waxayna Kenya laga soo bilaabo 1970-naadkii maanka ku haysey hab-fikirka EEZ oo Soomaalida sida qayaxan uga soo horjeedey. Waxaase April 2009 ay Kenya heshay madax Soomaaliyeed oo si ka fiirsasho la'aan ah ula saxiixday heshiiskaas.
Waxaa laga sugayaa madaxweynaha DFKMG Shariif Axmed in uu saxiixo xeerkii uu baarlamaanka DFKMG sida buuxda isugu raacay.